मेरो गन्थन: April 2009
यस सम्बन्धी लेख मैले अझै पूरा सकिन । त्यसैले अहिले लाई तस्वीरहरु मात्रै । केहि समय पछि यो लेख पूरा गर्नेछु । कृपया प्रतीक्षा गर्नु होला । आमाको हातबाट टिका थाप्दै !
आमा लाई लड्डू खुवाउँदै
चन्द्रलाई टिका लगाई दिंदै आमा !
बहिनीलाई टिका लगाई दिंदै आमा !
Posted by inashrestha at 3:06 AM No comments: Links to this post
Posted by inashrestha at 12:15 AM2comments: Links to this post
ब्लग अपडेट गर्दैछु, कृपया प्रतीक्षा गर्नु होला !!! नयाँ ब्लग कस्तो लाग्यो कुन्नी? तपाईंहरुको सल्लाह, सुझाव भए लेख्न नबिर्सनु होला ।- धन्यबाद !!!
Posted by inashrestha at 2:15 AM 1 comment: Links to this post
Posted by inashrestha at 12:00 PM No comments: Links to this post
Posted by inashrestha at 2:00 AM2comments: Links to this post
आज सुमित जन्मेको पनि १ महिना भयो । आगामी ब्लगहरुमा ऊ जन्मनु अघिका हाम्रो अवस्था माथि प्रकाश पार्ने कोसिस गर्दै छु । समयाभावको कारण पहिले नै राख्न खोजेर पनि निरन्तरता दिन सकेको छुइन । त्यसैले यसलाई श्रृंखलाबद्ध गर्नु परेकोमा क्षमा चाहन्छु ।
बिहे गरेको धेरै समयको अन्तराल पछि हामीले सन्तान पाउनु पर्छ र यो नै उत्तम समय हो भन्ने लाग्यो ।पारिवारिक दबाब कै बिच पनि हामीले बिहेको सात वर्ष रमाइलोसँग बिताउँदै थियौं । हामीलाई राम्ररी नै थाहा थियोसन्तान भए पछि हामीले धेरै कुराको बलिदान गर्नु पर्नेछ भनेर । त्यसमाथि मानसिक रूपमै पनि हामी तैयार भइनसकेकाले इच्छा हुँदा हुदै पनि तत्काललाई हामी दुबैले बच्चा नपाउने सल्लाह गरेका थियौं । परदेसी भए पछिझन् अनेक समस्याहरु थापिदै जाने रहेछ । आफैं बाँच्नको लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको अवस्थामा सन्तानजन्माउनु एक किसिमले पारिवारिक बोझ हो कि भन्ने लाग्यो । त्यति बेलाको अबस्थामा न बस्ने ठेगान, न राम्रोजागीर अनि कुन हिसाबले आफु तैयार रहने भन्ने समेत ज्ञान छैन । परिवारबाट टाढिएर विदेश आए पछिबच्चाको राम्रो स्याहार नहुने हो की भन्ने पिरलो भैरहने । त्यसैले पनि हामीले सन्तान पाउने रहर लाई आनाकानीगर्दै रह्यौं । उता घरबाट आमा बुवाले कान्छो छोरा तर्फ सन्तानको मुहार हेर्न पाइएन भन्ने गुनासो उत्तिकै थियो ।मैले चैं घरमा ४-५ जना नाति नातिनी हुँदा हुदै फेरि अर्को किन चाइयो भनेर बारम्बार सम्झाइ रहनु पर्थ्यो । करिबकरिब २ वर्ष अगाडि हामी नर्थ क्यारोलाइनाबाट बसाईं सरेर टेक्सास आयौं । हाम्रो बसाईं सराई को प्रमुख उद्धेश्य नैयही थियो । मैले राम्रो जागीर खाने र उनीलाई हेर विचार गर्न सक्ने भएपछि सन्तान जन्माउने । तर मेरो राम्रोजागिरले धेरै कुरा बदलिदियो । एक किसिमले मेरो दिनचर्या नै फेरियो । मेरो काम यस्तो भई दियो फुर्सद नै पाउनमुस्किल । सातै दिन जस्तो काम गर्नु पर्ने, बिहान उज्यालो भए देखि बेलुकी अँधेरो नभैन्जेल । यसले गर्दा मैलेउनीलाई समय दिनै पाइन । अनि ख्यालख्यालमै करिब करिब एक वर्ष त्यतिकै बित्यो । अब हाम्रो सम्बन्धलेबिस्तारै अर्को मोड़ लेला जस्तो भयो । अनि हामीले यो तरिकाले जीवन नचल्ने देख्यौं । अब हामीले निर्णय गर्नुथियो भविष्यको । २-३ महिनाको प्रयास हामीले सकारात्मक नपाए पछि डक्टरको परामर्श लिन पुग्यौं । उनकैसल्लाहमा हामीले केहि परिक्षणहरु गर्नु पर्ने भयो । जसको लागि हामी पहिले देखिनै तैयार थियौं । नतिजा हाम्रोलागि सोच्दै नसोचेको निस्कियो ।
Posted by inashrestha at 12:00 AM2comments: Links to this post
Posted by inashrestha at 12:30 PM No comments: Links to this post
James Harden becomes the first NBA player with back-to-back 50-point games - James Harden made NBA history this week becoming the first player to record back-to-back 50-point games.